Mpanamboatra masinina Extruder - Mpamatsy masinina Extruder China
LQSJ-A50、55、65、65-1 PE Masinina mihetsiketsika miakatra ambony ambany sy ambany
Ny tsofina ataon'ny milina fantsom-panafody, varingarina ary vodin-tsolika dia vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy izay namboarina sy namboarina tamin'ny fomba marina. Noho izany dia feo mafy izany, maharitra amin'ny fanoherana ny harafoana. Ny visy namboarina manokana dia manana kalitaon'ny feo amin'ny plastika, izay manampy amin'ny fampitomboana ny fahafaha-mamokatra. Ny Machine Machine mitsoka dia ampiharina amin'ny fitsofana ny sarimihetsika plastika toy ny polytene ambany (LDPE), polytene avo lenta (HDPE) ary polytene ambany ambany (LLDPE). Ny milina mitsoka horonantsary dia ampiharina betsaka amin'ny famokarana kitapo fonosana ho an'ny sakafo, akanjo, kitapo ary kitapo.
LQSJ-B50、55、65、65-1 、 Rotary Machine Head Film mitsoka milina napetraka
Ny milina mitsoka horonantsary dia ampiasaina amin'ny fitsofana polyethylene tsindry ambany ambany, izay efa be mpampiasa amin'ny famokarana sarimihetsika laminating, fonosana sarimihetsika, sarimihetsika mandrakotra fonosana, kitapo na sarimihetsika ho an'ny lamba sy fitafiana ary fitaovana fanangonana hafa. Ny motera lehibe dia mandray ny fifehezana matetika ny hafainganam-pandehan'ny maotera hanatsarana ny hafainganana mifehy ny fiorenan'ny motera lehibe ary mamonjy herinaratra 30%. Ny visy sy ny barika ara-materialy dia mampiasa aliminioma chrome-molybdenum 38 izay notsaboina azota ary ny endriny manintona dia mandray karazana manainga. Na inona na inona haben'ny sarimihetsika, na lehibe na kely, ny milina mitsoka horonantsary dia mety hahatratra ny vokatra tsara indrindra amin'ny fampangatsiahana.
LQ-55 Masinina mitsoka horonantsary miaraka amin'ny fantsom-panafody width Film lebar 800MM）
Ny milina mitsoka horonantsary dia ampiasaina amin'ny fitsofana ny sarimihetsika vita amin'ny plastika misy polyethylene ambany (LDPE). Ny milina mitsoka fantsona dia ampiasaina amin'ny polyethylene avo lenta (HDPE) sy polyethylene ambany hakitroka (LLDPE) sns. . Ny milina mitsoka horonantsary dia be mpampiasa amin'ny fitaovana vita pirinty, vokatra ho an'ny vokatra fanondranana sy indostrialy, sns.
LQ-A Series Single Layer Film mitsoka milina
Famaritana ara-teknika sy fikirakirana Model LQ-A75-1500 LQ-A60-1000 LQ-A65-1200 ampahany lehibe moto 37KW inverter fanaraha-maso 22KW inverter fanaraha-maso 30KW inverter control box 200 200 mahery nify mafy ambonin'ny faritra 180 mahery mafy nify ambonin'ny 200 volo sy varingarina mafy nify mafy 75 28 ： 1 60 30 ： 1 65 30 ： fitaovana 1 visy 38Chromium molybdenum aluminium nitrogen fitsaboana 38Chromium molybdenum aluminium nitrogen nitrogen 38Chromium molybdenum alumi ...
LQ5L-1800 Masinina mitsoka horonantsary miaraka amin'ny extrusion
Fampahafantarana momba ny vokatra fampidirana Ity modely ity dia natao ho an'ny fanerena sy ny fonosana meterials miaraka amina hery mitombo avo lenta ao anatin'izany ny plastika henjana. Tavoahangy PET, ahitra, spaonjy, lamba sy ny hafa. Baler hydraulic hydraulic adidy mavesatra be miaraka amina famolavolana fandanjalanjana roa-varingarina, ary rafitra hydrau-lic tsy manam-paharoa hanomezana hery maharitra maharitra mandritra ny famatrarana. Izy io dia miteraka hery famoretana lehibe kokoa handefasana entana mavesatra kokoa. fomba fanokafana amin'ny lafiny efatra miaraka amin'ny caption capilitit "#" ...
Single-Multi -Layer Co-Extruder Cast Embossed Film Line
Ity tsipika FILM FAMPIASANA TALOHA AN-TSAINA / MULTI-LAYER ity dia natao hamokarana sary mihetsika, backshet ho an'ny fitaovana ara-pahadiovana miaraka amin'ny LLDPE, LDPE, HDPE ary EVA
LQ-LΦ 65/110/65 × 2350 CPE (EVA) sarimihetsika fandefasana kilasy ambony
Ity singa LQ-LΦ 65/110/65 × 2350 CPE (EVA) avo lenta ity dia milina fandefasana sarimihetsika feno plastika, fandidiana mora, androm-piainana lava, fitsitsiana herinaratra ary teknolojia vahiny hafa, miaraka amin'ny LDPE, LLDPE, HDPE ary EVA sy ny sisa miorina amin'ny taona maro ny fanamboarana fitaovana sy ny fiasan'ny mpanjifa.
LQ-80/120/80 × 2350 Haingam-pandeha haingam-pandeha telo sosona na sosona dimy manaparitaka milina filma misy rivotra afovoany
Fahaiza-manao avo: hafainganam-pandeha 350 M / min; vokatra faratampony hatramin'ny 12T / andro.
Faharanitan-tsaina avo: fampidirana olona-masinina, serivisy fanaraha-maso lavitra elektronika, rafitra fanaraha-maso mandroso kokoa.
Kalitao avo: efatra-axis ho an'ny volume, servo drive, ny fivoahan'ny kalitaon'ny vokatra vita avo kokoa, matevina, mihinjitra, fanoherana ny puncture tsara kokoa.
Fanjifana angovo ambany: rafitra fanamafisam-peo mahomby amin'ny angovo manokana, fihenan'ny fihenan'ny angovo.
Mora ny miasa: fandidiana olona iray, hafainganam-pandeha lehibe, modely fanaraha-maso ny mari-pana.
LQB-3 Masinina roa dingana miasa feno milina mitsivalana mandeha ho azy
ny Ny masinina roa-dingana Multi-miasa feno-mandeha ho azy Blow Mulding dia mampiasa interface-solosaina-olombelona mba hifehezana ny fomba fiasa miasa manontolo, ny famoahana ho azy, ny fitsofana ny fiara, ny fidinan'ny fiara. Ny varingarina dia miangona miaraka amina switch induction magnetika. Mifandraisa amin'ny PLC hifehy ny dingana rehetra ary hizaha ny varingarina tsirairay.
LQAL-2 Milina famolahana tsofina
LQ AS Masinina manamboatra tsindrona-tsindrona
Ny maodely AS series dia mampiasa firafitra misy gara telo ary mety amin'ny famokarana kaontenera plastika toy ny PET, PETG, sns. Ampiasaina matetika ao anaty fitoeram-pako ho an'ny makiazy, fanafody, sns.
LQ10D-560 Milina fametahana
UPG Blow Molding Machine dia mifototra amin'ny kajy marina ny famolavolana die runner, izay voafintina, tsy misy zoro maty ary afaka manova loko haingana